WLDH kwụ Ribbon igwekota - China Changzhou Daming Pharmaceutical Equipment
WLDH kwụ Ribbon igwekota
EYH Series abụọ akụkụ igwekota
DSH Series Ugboro abụọ ịghasa cone igwekota
FL Fluid ndina Granulator
YPG Series Pressure Ịgba draya
GFG Series High-arụmọrụ Fluid ndina draya
Ọrụ Ụkpụrụ a igwe na-emi esịnede akpa, ịghasa akpali akpali paddles na ndị mepere akụkụ; na ịghasa naa na-adịkarị mere n'ime 1 oyi akwa ma ọ bụ 3 n'ígwé, ná mpụta ịghasa converge bụ ihe onwunwe na etiti si abụọ n'akụkụ, na n'ime oyi akwa nke ịghasa na-enye ihe na abụọ n'akụkụ si center, ka si convection Ịgwakọta . Njirimara Big ọnụọgụ nke loading, obere nwere ebe. O siri ike ọcha mgbe ọ na-eji aka mix viscous ma ọ bụ ihe nyagide ihe onwunwe. ...
Nke a igwe na-emi esịnede akpa, ịghasa akpali akpali paddles na ndị mepere akụkụ; na ịghasa naa na-adịkarị mere n'ime 1 oyi akwa ma ọ bụ 3 n'ígwé, ná mpụta ịghasa converge bụ ihe onwunwe na etiti si abụọ n'akụkụ, na n'ime oyi akwa nke ịghasa na-enye ihe na abụọ n'akụkụ si center, ka si convection Ịgwakọta .
Big ọnụọgụ nke loading, obere nwere ebe.
O siri ike ọcha mgbe ọ na-eji aka mix viscous ma ọ bụ ihe nyagide ihe onwunwe.
Rịbọn igwekota na-eji na Ịgwakọta nke viscous ma ọ bụ ihe nyagide powder ihe onwunwe, ma ọ bụ nke Ịgwakọta nke powder nke kwesịrị tinye mmiri mmiri, na mado ihe onwunwe. Ka ọ dịgodị, n'ihi na ọ bụ ike ọcha viscous ihe onwunwe, na igwe adabara Ịgwakọta ikpe, ebe mmepụta bụ nnukwu na ọ dịghị mkpa nke displacing ihe dịgasị iche iche ugboro ugboro.
mbuaha ego / ogbe
Rịba ama: The n'elu-e kwuru na ngwaahịa nwere ike na carbonaceous ígwè C ma ọ bụ igwe anaghị agba nchara P
Previous: SYH Series Three akụkụ igwekota
Next: VHJ usoro igwekota
Agụba Ịgwakọta Machine
Ugboro abụọ cone igwekota
Ugboro abụọ yiri okoso igwekota
Fatịlaịza Ịgwakọta Machine
Fatịlaịza Powder Ịgwakọta Machine
High Oru oma Pharmaceutical Ịgwakọta Machine
Laboratory Rubber Ịgwakọta Machine
igwekota / Ịgwakọta With Inyeaka Engine
Pharmaceutical Ịgwakọta Machine
Pharmaceutical Powder Ịgwakọta Machine
ntụ ntụ Ịgwakọta Machine
Otito Pharmaceutical Ịgwakọta Machine
Rubber Ịgwakọta Machine
tank Model Ịgwakọta-Machine
Three akụkụ Motions Igwekota
trough Type igwekota
trough Type Ịgwakọta Machine
Wldh Series kwụ Ribbon igwekota
VHJ usoro igwekota
Kra Series oghere igwekota
HJ Series abụọ cone igwekota
SYH Series Three akụkụ igwekota
NO. 10, Development Mpaghara, ZHONGJIANG, ZHENGLU obodo, TIANNING District, Changzhou, Jiangsu Province, CHINA.
Olee otú ịhọrọ centrifugal ịgba draya kọọ ...